Abaphambukeli abagonywe ngokupheleleyo banokungena e-US ukuqala nge-8 kaNovemba
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Abaphambukeli abagonywe ngokupheleleyo banokungena e-US ukuqala nge-8 kaNovemba
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Shopping • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Iindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo zinokungena e-US ukuqala nge-8 kaNovemba.
Izitofu ze-COVID-19 ezivunyiweyo nguMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) ezingasetyenziswanga okanye ezingagunyaziswanga e-US ziya kwamkelwa njengeyona ndlela ifanelekileyo yokugonyelwa, inike ukukhanya okuluhlaza kwe-AstraZeneca ephuhliswe e-UK, kunye ne-China Sinopharm kunye ne-Sinovac.
I-US iphakamisa izithintelo zokuhamba kubakhenkethi bamanye amazwe abagonywe ngokupheleleyo i-COVID-19.
Abahambi bamanye amazwe abagonywe ngokupheleleyo i-COVID-19 baya kuvunyelwa ukuba bangene e-US ukuqala nge-8 kaNovemba
Umgaqo-nkqubo omtsha wase-US ukhokelwa yimpilo yoluntu, engqongqo, kwaye engaguquguqukiyo, itsho iNdlu yeWhite House.
I-White House ibhengeze namhlanje ukususwa kwezithintelo zohambo ze-COVID-19, yaza yathi bonke abahambi bamanye amazwe abagonywe ngokupheleleyo i-coronavirus baya kuvunyelwa ukuba bangene e-United States ukusukela nge-8 kaNovemba.
Unobhala weendaba e-White House oncedisayo uKevin Munoz uqinisekisile namhlanje ukuba "umgaqo-nkqubo omtsha wokuhamba wase-US ofuna ugonyo kubahambi bamazwe angaphandle abaya e-United States uza kuqala ngo-Novemba 8."
Umnumzana Munoz ukwathumele ku-Twitter ukuba umgaqo-nkqubo "ukhokelwa yimpilo yoluntu, ungqongqo, kwaye awuguquguquki."
U ngqongqo Isithintelo sokuhamba e-USigcine izigidi zabakhenkethi abavela e-China, Canada, Mexico, India, Brazil, e-Europe, e-United States, bekhubaza ukhenketho lwase-US, kwaye benzakalisa noqoqosho lwasekuhlaleni.
Kwinyanga ephelileyo, i-White House yatsho ukuba izakuphakamisa izithintelo kubahambi bomoya abavela kumazwe angaphezu kwama-30, kubandakanya i-China, i-India, i-Iran, kunye ne-Yurophu enkulu kwasekuqaleni kuka-Novemba, kodwa iyekile ukunikezela ngomhla ochanekileyo.
Ngolwesibini, US Amagosa athi ilizwe liza kuphakamisa imiqobo yokuhamba kwimida yomhlaba kunye nokuwela inqanawa eCanada naseMexico kwabo bagonywe ngokupheleleyo.
Izitofu zokugonya ze-COVID-19 zivunyiwe I-World Health Organization (WHO) ezingasetyenziswanga okanye ezingagunyaziswanga e-US ziya kwamkelwa njengeyona ndlela ifanelekileyo yokugonyelwa, inike ukukhanya okuluhlaza kwe-AstraZeneca ephuhliswe e-UK, kunye ne-China Sinopharm kunye ne-Sinovac.
ICanada yawuvula kwakhona umda wayo womhlaba kunye ne-US ekuqaleni kuka-Agasti ukuze kugonywe ngokupheleleyo abantu baseMelika ngovavanyo olubi lwe-COVID-19 kuhambo olungabalulekanga. Ukungabikho kwembuyekezo kummelwane wayo, nangona kunjalo, kwatsala izikhalazo kumagosa aseCanada.
Ukuvalwa kwenani elikhulu labemi abangabemi baseMelika abangena eMelika kuye kwanyanzeliswa ngaphezulu kweenyanga ezili-18 ngenxa yobhubhane we-coronavirus. Owayesakuba nguMongameli uDonald Trump wamisa okokuqala kubaphangi abasuka e-China ekuqaleni konyaka we-2020, emva koko wandisa lo mda kuninzi lweYurophu.
Umbutho wezokuHamba wase-US ukhuphe le ngxelo ilandelayo kwisibhengezo sokuba i-US izakuyivula ngokusesikweni imida yayo ukugonya abahambi bamazwe aphesheya ngoNovemba 8:
“Uhambo lwase-US kudala lucela ukuvulwa kwakhona kwemida yethu ngokukhuselekileyo, kwaye siyasamkela isibhengezo sabaphathi be-Biden somhla obekiweyo wokwamkela abahambi bamazwe apheleleyo abagonyiweyo.
Umhla ubaluleke kakhulu ekucwangciseni-kwiinqwelomoya, kumashishini axhaswayo kukhenketho, nakwizigidi zabakhenkethi kwihlabathi liphela abaza kuphinda baqhubele phambili izicwangciso zokutyelela i-United States kwakhona. Ukuvula kwakhona kubakhenkethi bamazwe aphesheya kuya kubonelela ngesiphithiphithi kuqoqosho kwaye kukhawulezise ukubuya kwemisebenzi enxulumene nohambo eyayilahlekile ngenxa yezithintelo zohambo.
"Siliqhwabela izandla ulawulo ngokuqaphela ixabiso lokuhamba kumazwe ngamazwe kuqoqosho lwethu nakwilizwe lethu, kunye nokusebenza ukuvula imida yethu ngokukhuselekileyo kwaye siphinde sakwazi ukudibanisa iMelika nelizwe."